स्वभिमान गुमाउनुको परिणाम - NepalDut NepalDut
स्वभिमान गुमाउनुको परिणाम
कुकुर चारखुट्टे जनावर मध्ये सबभन्दा चलाक जनावर हो । यसले सुङ्घेर आफ्ना शत्रुहरू पत्ता लगाउन सक्छ । दौडमा चितुवासंग प्रतिस्पर्दा गर्न सक्छ । भूकम्प बाडी आधिबेहरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू आउदै छ भन्नेकुरा आउनु भन्दा केही सपहिला नै थाहा पाऊदछ । सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता पनि राम्रै राख्दछ । कतिकुरामा यश जनावरले मानिसले भन्दा पनि उच्च बौध्दिक ज्ञान राख्दछ ।मानिसले यश जनावरलाई पाल्छन् पनि र एक किसिमले यो जनावर घरको एक सदस्य जस्तो पनि हुन्छ । यस जनावरले मानिसहरूको धन जन जोगाउन आफ्नो प्राण समेत अर्पण गर्छ । तै पनि मानिसहरूले आफ्नो मन नपरेको अर्को मानिसलाई तुच्क्ष देखाउन अरू जनावरसंग तुलना नगरेर कस्तो निच कुकुर जस्तो रहेछ भन्दछन् ।
पहिला मानिसलगायत सबै जनावर जङ्गलि नै थिए । मानिसले प्राकृतिसंग सङ्घर्ष गरेर आफ्नो खाने बस्ने तरिकामा परिवर्तन ग-यो । नजिकबाट अवलोकन गरेको कुकुरले आफ्नो सङ्घर्षशिल जीवन छाडेर सजिलो जीवन विताउन मानिसको पछि लाग्यो । उसले स्वजातीयहरू प्रति बिश्वस घात ग-यो । मानिसकालागि आफ्नै स्वजातिहरूको सिकार गर्न स्वजातिहरूलाई देखाउने काम ग-यो । त्यसैले यो जनावर जति चलाक बुध्दिमानि क्षमतावान भएर पनि जनावर मध्ये सबभन्दा निच मानिन्छ । यस जनावरले आफ्नो अस्तित्व यश पृथ्वीमा रहेसम्म यो अपमान सहि रहनु पर्ने छ ।
दलालपूँजीवादी संसदीय ब्यवस्था र बैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकृतिका एक अर्काका प्रतिस्पर्दी ब्यवस्था हुन् ।कुनै समय दलालपूजीवादी संसदीय ब्यवस्थाको प्रतिनिधित्व काग्रेस एमालेका गिरीजा, शेरबहादुर, के.पी. ओली माधव नेपाल, बामदेव आदिले गर्दथे । बैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्थाको नेतृत्व प्रचण्ड, किरण ,गौरव, लगायत विप्लवहरूले गर्दथे।त्यसमा पनि मुख्य नेतृत्वमा प्रचण्ड थिए ।उनी पार्टीका अध्यक्ष जनसेनाका सर्बच्च कमाण्डर समेत थिए । नेपालको जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन (रीम) संगठन र दक्षिण एसियाली कम्युनिष्ट संगठन (कम्पोशा) को नेतृत्व समेत गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को मार्ग निर्देशिक सिध्दान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादमा नेपालको शन्दर्भमा प्रचण्डपथ जोडेर मार्क्स लेनिन माओको समकच्क्षि बनेका थिए ।मार्क्स लेनिन माओ स्तालिनसंगै आफ्नो फोटो राखेका थिए । उनको नाम सुन्दा प्रतिक्रियावादी थर्कमान हुन्थे । उनको इसारामा सैनिक क्यम्प कब्जा हुन्थे ।उनको टाउकाको मोल तोकिएको थियो तर उनी जनताका बीचमा खुला थिए । अहिले उनै प्रचणडले ओलीसंग कार्यकारी अध्यक्ष हुनपाऊ भनेर निबेदन गर्न पर्ने स्थितिमा आइपुगे ।
के प्रचण्डले युध्द हारेर यश स्थितिमा आइ पुगेका हुन ? युध्दहारेर हुँदै होइन। जब प्रचण्डले शान्ति सम्झौता गरि दलालपूजीवादको चास्निमा डुबे उनले सर्वहाराबर्गलाई घात गरे । जनसेना जनसरकार जनअदालत आदि संरचना बिगठन गरे । उनलाई मैनै राज्य हुँ भन्ने भ्रम भयो । जब क्रान्तिकारी साथीहरूले छाडि क्रान्तिलाई पुनर्गठन गर्नतर्फ लागे उनको आकार एकै पटकमा हात्तीबाट मुसामा परिणत भयो । काग्रेस हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने आसमा कुनै सैध्दान्तिक आधार बिनै आफुसंग रहेको समुहलाई एमालेमा मिलाएर आफू ओलीको कार्यकर्ता बन्न पुगे । तिमी जस्तो सर्बहारा नैतिकता बोकेको ब्यक्तिले त यत्रो बि्श्वस घात ग-यउ भने दलालपूत्जीवादको पुरानो पक्का दलालले तिमीसंग गरेको भद्रसहमति मान्छ भन्ने केही छैन ।
हिजोका आफ्ना स्वजनहरू जो अझै जनताका पक्षमा आत्मबलिदान गर्न लागिपरिरहेका छन तिनिहरूलाई दलालपूजीबादको कलो खाएर तिमी र तिम्रा मान्छेहरूले अहिले सिकर खेलिरहेका छौ । ओलीले तिमीहरूलाई कुकुर भन्दा ठूलो ठानिरहेका छैनन् । उनको आदेश पालना गर्नुभन्दा अन्य स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्नु मृगमरिचिका बाहेक केही हुने छैन । हिजो ओलीले प्रचण्डलाई तिमी कार्यकारी अध्यक्ष भयौ भने फेरि आजै मर्यादाक्रममा पहिलो अध्यक्ष मै हुँ भने । यश आराम सुख सयल त पाउला अब मात्म नबेचेका किरण विप्लवहरूले जस्तो आत्म सन्मान कहिल्यै पाउने छैनौ । सर्बहाराबर्गप्रति घात गरेर बिजातीय दलालपूजीबादी कित्तामा गएर जुन अपराध ग-यउ यसको सजाँय तिमीहरूले जीवनभर सधै अपमानित भएर बाच्नु पर्नेछ ।